Masoivoho amerikanina: misy sekoly misoloky ho mpiara-miasa | NewsMada
Masoivoho amerikanina: misy sekoly misoloky ho mpiara-miasa
Misy sekoly mampianatra teny anglisy misoloky ho mpiara-miasa akaiky amin’ny masoivoho amerikanina. Mitsipaka marindrano izany ny masoivoho amerikanina eto Madagasikara sy kaomôro.
Hentitra ny masoivoho amerikanina nanao fanambarana, mampitandrina amin’ny endrika fisolokiana ataon’ireo sekoly na ivontoerana misoloky ho miara-miasa amin’ny masoivoho. Fantatry ny masoivoho amerikanina eto Madagasikara sy Kaomoro ny fisian’ny fikambanana mitonona ho miara-miasa akaiky amin’izy ireo amin’ny fampianarana teny anglisy eny rehetra eny.
Mampanantena marim-pahaizana atolotry ny masoivoho amerikanina mihitsy ireny sekoly sasany ireny izay lavin’ny masoivoho marindrano fa fisandohana izany.
Miasa amin’ny sehatry ny fampiroboroboana ny teny anglisy sy manao ho laharam-pahamehana ny fampianarana teny anglisy ny masoivoho amerikanina, saingy tsy miasa amina ivontoerana sandaina vola velively raha ny fampitandremana hatrany.
Mila mailo, araka izany, ireo mianatra amin’ireny karazan-tsekoly mampianatra teny anglisy ireny satria mety ho voasoloky. Entina hambaboana olona ny filazana fa miara-miasa amin’ny Amerikanina mivantana ny sekoly izay lainga sy fisolokiana tanteraka, araka ny filazana ofisialy avy amin’ny masoivoho amerikanina.
Maimaim-poana ny fampianarana teny anglisy ataon’ny masoivoho amerikanina ao amin’ny rohy http://americanenglish.state.gov izay misy lesona sy fampianarana.
Manoloana ny hamafin’ny fifaninanana eo amin’ny samy sekoly, tonga hatramin’ny fisolokiana mihitsy ny fisarihana mpianatra ka izao tratra izao.
Saika isaky ny elakela-trano ny sekoly ary tena mahomby ny sasany, saingy manambaka ny bado kosa ny maro amin’ny fitakiana volabe kanefa tsy misy vokatra tsara akory.
Marihina fa anisan’ny tenim-pirenena mahasarika ny tanora ankehitriny ny teny anglisy ka antony maha be tsy handraofana ireo sekoly tsy tena marin-pototra akory izany. Mila manadihady tsara rehefa hiditra amin’ireny sekoly ireny mba tsy ho voafitaka.